मैले यूट्यूब लाइकहरू किनें भने के फाइदा हुन्छ?
जैविक विकासलाई प्रोत्साहित गर्न विश्वसनीयतामा सुधार गर्दछ।
तपाइँको भिडियो मा एक जस्तै कुराकानी गर्न अरूलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
वितरण गति: २०० देखि likes०० लाइक प्रति दिन।
परिणाम-24-72 hours घण्टामा सुरू हुन्छ र पूर्ण नभएसम्म जारी रहन्छ।
स्प्लिट धेरै भिडियोहरूमा मनपर्दो (न्यूनतम १०० भिडियोहरू प्रति भिडियो)। अर्डर likes०० मनपर्दो र १ देखि videos भिडियोहरूमा विभाजित।
तपाईंलाई किन मनपर्न YouTube मनपराउन किन्न आवश्यक छ?
अधिकांश व्यक्तिहरू जब उनीहरू YouTube मा भिडियो हेर्छन् हेर्दछन्; मनपराउँदछ, मन नपरेका टिप्पणीहरू, सments्लग्नता, दृश्य र ग्राहकहरू। यी सबैले YouTube को स्तर निर्धारण एल्गोरिथ्म कारकहरू के हुन् कि जसले प्रयोगकर्तालाई कि त भिडियो हेर्न वा यसलाई स्किप गर्न चाहनेछ। तपाईं आज एक भिडियो अपलोड गर्न आशा गर्नुहुन्न र द गो मा सयौं जस्तै प्राप्त गर्न सुरू गर्नुहोस्। त्यसकारण तपाईंले आफ्नो भिडियोको लागि YouTube मनपर्दो किन्न आवश्यक छ चाहे एक शुरुआतको रूपमा वा एक समर्थकको रूपमा। अझ राम्रा ब्लगरहरूले पनि तपाईंलाई उनीहरूको भिडियोहरू हेरेपछि मनपर्‍नेछैनन्। अब, म तपाईंलाई YouTube लाइकको महत्त्व बताउन चाहन्छु।
YouTube श्रेणीकरण: यूट्यूब, यद्यपि यसले आफैसँग मात्र खोजी गर्दछ; विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो खोज इञ्जिनको रूपमा छन। यो किनभने प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई लोकप्रिय र सान्दर्भिक भिडियोहरू डेलिभर गर्न डिजाइन गरिएको एल्गोरिथ्म प्रयोग गर्दछ। भिडियोहरू जुन खोजी परिणामहरूमा उच्च श्रेणीमा अनुकूलित हुन्छन्। YouTube अप्टिमाइजेसन मनपर्दो र सगाई मा निर्भर गर्दछ। त्यसैले यो सही छ कि अधिक लाइक र स and्लग्नता भएको भिडियो निश्चित रूपमा उच्च स्तरमा जान्छ।
सामाजिक साझेदारी: यो के हो एक भिडियो भाइरल जान। जब एक YouTube प्रयोगकर्ताले हजारौं लाइक भएको भिडियो देख्छ, त्यो स्वाभाविक प्रवृत्ति छ कि त्यो भिडियो अन्य सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा साझा गर्न चाहान्छ। यसले सम्पूर्ण नयाँ श्रोताहरूलाई जन्म दिन्छ।
फाउल प्ले रोक्नको लागि: एक विकल्पको लागि 'मन नपर्ने बटन' जस्तो अवस्थित छ। सबैले तपाइँको भिडियो मनपर्दैन, जुन एक पक्का तथ्य हो। धेरै मन नपर्ने मनपराउने भिडियो कहिल्यै रिकभर हुन सक्दैन। जब तपाईं आफ्नो नयाँ भिडियोको लागि मनपर्दो खरीद गर्नुहुन्छ, यसले भिडियोलाई स्थापना गर्न समय दिन्छ ताकि भिडियोको बिरूद्धमा कुनै नकारात्मक अभियान अप्रभावी हुनेछ।
दर्शकहरूको राय: केही प्रयोगकर्ताहरू असंख्य मनपर्दोहरूसँग मनपर्दछ, किनकि उनीहरूलाई यो भिडियो लायक लाग्दछ। जब मनपर्दो बनाउने मन नपराउने अनुपात धेरै स्पष्ट छ, प्रयोगकर्ताहरू त्यो भिडियो हेर्न चाहन्छन्। पछिल्ला दर्शकहरूको प्रतिक्रिया नयाँ प्रयोगकर्तालाई त्यो भिडियोमा पनि संलग्न हुन चाहान्छ। त्यसकारण धेरै व्यक्तिलाई तपाईंको भिडियोमा संलग्न गराउनको लागि यसका लागि मनपर्दो खरीदहरू गर्न सल्लाह दिइन्छ, ताकि र्याकिंगलाई बढावा दिन र प्रयोगकर्ताहरू हेर्नको लागि इच्छुकता बढाउन।
अब तपाईंले YouTube लाइकको महत्त्व देख्नुभयो र यो तपाईंको च्यानलको वृद्धिको लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ। त्यसोभए यो सुरक्षित छ कि, युट्युब लाइकहरू किन्नु तपाईंको च्यानल बढावा दिन एक उत्तम तरिका हो।
सबै सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरू एक लाइक बटनको साथ आउँछन्। तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ, यो किन यस्तो आवश्यक छ? यस बटनले प्रयोगकर्तालाई अन्तरदृष्टि दिन्छ जुन तपाईं तिनीहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया जान्न चाहानुहुन्छ। अधिक मनपर्दो को साथ भिडियो निश्चित रूप मा अधिक विचार, सगाई र ध्यान प्राप्त गर्नेछ। त्यसो भए, म तपाईंलाई आग्रह गर्दछु कि त्यो सोचाइलाई तपाईंलाई प्राकृतिक मनपर्दोहरूको लागि कुर्नुहोस् भन्नुहोस्। आज नै YouTube मनपर्दो खरीद गर्नुहोस् र तपाईंको भिडियो दिनुहोस् जुन भाइरल हुनको लागि प्रोत्साहित गर्दछ।
म ,30,000०,००० भन्दा बढी यूट्यूब लाइक चाहन्छु। के तपाईं अधिक वितरण गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, हामी ,30,000०,००० भन्दा बढी यूट्यूब लाइकहरू पुर्‍याउन सक्छौं!
हामी ,30,000०,००० यूट्यूब मनपर्दो प्रस्ताव गर्दछ अधिकतम मात्रामा कसैले यो पृष्ठमा विभिन्न कारणका लागि किन्न सक्छ, तर कुनै पनि तिनीहरूलाई प्रदान गर्ने हाम्रो क्षमतासँग सम्बन्धित छैन। यदि तपाईं ,30,000०,००० भन्दा बढी यूट्यूब लाइक खरीद गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामी तिनीहरूलाई डेलिभर गर्न सक्दछौं, तर यो महँगो हुनेछ।
यदि तपाईं ,30,000०,००० भन्दा बढी यूट्यूब लाइक खरीद गर्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाईं खरीद गर्न चाहानुहुन्छ मात्रा निर्दिष्ट गर्नुहोस्। हामी त्यसोभए कस्टम मूल्य निर्धारणको साथ प्रतिक्रिया दिनेछौं।
जब तपाईं हामीबाट युट्युब लाइकहरू खरीद गर्नुहुन्छ, परिणामहरू तपाईंको अर्डर गरे पछि २--24 घण्टा भित्र तपाईंको भिडियोमा देखा पर्न सुरु हुन्छ र परिणामहरू दैनिक जारी रहन्छ।
हामी प्रति दिन करीव २०० देखि likes०० लाइकको गतिमा डेलिभर गर्दछौं। नतिजाको रूपमा, यदि तपाईं १200०० लाइकहरू अर्डर गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई सुरु हुन hours२ घण्टा लिन सक्नुहुनेछ र त्यसपछि थप २ देखि days दिन पूर्ण रूपमा वितरण गर्न सक्नुहुनेछ।
अधिक खरीद तपाईं लाईक, अब यो पूरा तपाईंको अर्डर डेलिभर गर्न लिन्छ।
यदि तपाईं धेरै ठूलो मात्रामा अर्डर गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई छिटो डेलिभर गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र छिटो डेलिभरी सम्भव छ भने हामी तपाईंलाई जानकारी दिन सक्दछौं।
१००० अवलोकन ($ २०) १००० अवलोकन ($ २०) १००० अवलोकन ($ २०) १००० अवलोकन ($ २०) १००० अवलोकन ($ २०) १००० अवलोकन ($ २०)
१० टिप्पणीहरू ($ २०) १० टिप्पणीहरू ($ २०) १० टिप्पणीहरू ($ २०) १० टिप्पणीहरू ($ २०) १० टिप्पणीहरू ($ २०)
१०० सेयर ($ १०) १०० सेयर ($ १०) १०० सेयर ($ १०) १०० सेयर ($ १०) १०० सेयर ($ १०) १०० सेयर ($ १०) १०० सेयर ($ १०)